Zvishandiso uye Zvakanakira zveInduction Heating Steam Boiler
Zvishandiso uye Zvakanakira zveInduction Heating Steam Boiler - Induction Steam System muKugadzira uye Maitiro Indasitiri.
Steam inonyanya kushandiswa kune chinangwa chekupisa. Kushandisa chiutsi pakugadzirisa kudziyisa kunopa akawanda mabhenefiti pamusoro peimwe yekudziya midhiya. Mabhenefiti akawanda, kureruka kweiyo sisitimu uye kugona kwakanyanya uye kuvimbika kunoita kuti steam ive sarudzo yekutanga yekupisa.
Steam inogona kushandiswa kungave kupisa kwakananga kana kudziya kusina kunanga.
Direct HeatingPakupisa kwakananga, chiutsi chinobaiwa zvakananga muchinhu chinofanira kudziyiswa. Kuchengetedza kunofanira kutorwa kuti kusanganiswa kwakakodzera kunoitika kuti kuve nechokwadi chekudziya kwakafanana. Izvo zvakakoshawo kuve nehanya kuti hapana tembiricha overshoots inoonekwa. Mapombi eSparge anofanirwa kushandiswa kuona kuti chiutsi hachitizire kunharaunda pasina kudziyisa chigadzirwa. Muindasitiri yemishonga kana yechikafu nezvinwiwa, utsi hwehutsanana hwepamusoro (hwakachengeteka kudyiwa nevanhu) hunofanira kugara huchishandiswa pakudziisa.
Indirect HeatingIyo nzira isina kunanga yekupisa inoshandisa steam kupisa chigadzirwa nerubatsiro rwezvinopisa kupisa kuitira kuti chigadzirwa chisauye panyama chinosangana nemhepo. Iyo yekudziya isina kunanga inogona kuitwa kuburikidza nekushandiswa kweakasiyana ekudziya emidziyo senge vabiki, midziyo ine jaketi, ndiro yemhando kana goko uye chubhu mhando yekupisa yekutsinhana nezvimwe.
Iyo nzira yeatomization inovimbisa kupisa kuri nani kwemafuta. Izwi rokuti atomization rinoreva kuparuka kuita tunhu tudiki. Mune zvinopisa, chiutsi chinoshandiswa nechinangwa cheatomizing mafuta. Izvi zvinovimbisa nzvimbo yakakura yepamusoro yemafuta anowanikwa pakupisa. Nekuda kweatomization, kuumbwa kwesoti kunoderedzwa uye kugona kwese kwekupisa kunokwira.
Steam yeSimba Generation
Nzvimbo dzekutanga dzekutengesera dzepakati pekugadzira magetsi muNew York neLondon, muna 1882, dzakashandisawo injini dzemagetsi.
Kwemakumi emakore, chiutsi chiri kushandiswa nechinangwa chekugadzira magetsi muchimiro chemagetsi. Zvigadzirwa zvemagetsi emhepo zvinoshanda paRankine Cycle. MuRankine cycle, superheated steam inogadzirwa uye yozoendeswa kune steam turbine. The steam inotyaira turbine iyo inoburitsa magetsi. Iyo steam inoshandiswa inoshandurwa zvakare kuva mvura uchishandisa condenser. Iyi mvura yakadzoserwa inodyiswa zvakare kubhailer kuti ibudise chiutsi.
Kushanda kwesimba remagetsi kunotsamira zvakananga pamusiyano pakati pekumanikidza uye tembiricha yehutsi pakupinza uye kubuda kweturbine. Nokudaro, kushandiswa kwekushisa kwepamusoro uye high pressure steam inokurudzirwa. Saka, zvidyarwa zvekugadzira magetsi zvinonyanya kushanda zvakanaka kana mupfu unopisa zvakanyanya ukashandiswa. Sezvo kudzvinyirirwa kwakanyanya kunosanganisirwa, mvura chubhu boilers inoshandiswa kugadzirwa kweutsi.
Kuchengeta hunyoro chinhu chakakosha cheHVAC masisitimu sezvo hunyoro hukadzikira kana hwepamusoro pane hunodiwa huine mhedzisiro yakaipa pavanhu, michina uye zvinhu. Humidity yakadzikira pane yaidiwa inogona kutungamira mukuwomeswa kwemucus membrane izvo zvinozopedzisira zvakonzera kusagadzikana kwekufema.
Kudzikira humidity zvakare kunotungamira kune yakawedzera static matambudziko emagetsi izvo zvinogona kukanganisa midziyo inodhura.
Steam inogona kushandiswa kune chinangwa chekunyorovesa. Kushandisa steam nechinangwa chekunyorovesa kunopa mamwe mabhenefiti pane mamwe midhiya. Kune akasiyana marudzi ehumidifiers kubva evaporating humidifiers kune ultrasonic ayo kuti aenderane akasiyana maapplication.
Kuomeswa kwechigadzirwa ndiko kumwe kushandiswa kweutsi uko hutsi hunoshandiswa kubvisa hunyoro kubva muchigadzirwa. Conventionally, mhepo inopisa inoshandiswa pakuomeswa kwechigadzirwa. Kushandisa steam kuoma kunoita kuti sisitimu ive nyore, nyore kudzora mareti ekuomesa uye compact. Iyo yakazara capital investment zvakare yakaderera.
Nekune rimwe divi, kushandisa chiutsi kwakachipa pakushanda kana zvichienzaniswa nemhepo inopisa. Iri zvakare imwe nzira yakachengeteka. Kushandiswa kweupfu mukuomesa chinangwa zvakare kunovimbisa kunaka kwechigadzirwa kana uchienzaniswa nemhepo inopisa.
Iyo musimboti we induction steam boilers|electromagnetic induction steam jenareta|induction kudziyisa steam boilers
The steam tembiricha pressure pressure chati
Categories Technologies Tags tenga induction steam bhaira, tenga induction steam system, electromagnetic steam system, induction heat steam, induction mweya bhaira, induction steam midziyo, induction steam kupisa, induction steam muchina, induction steam system, magnetic steam system, steam applications, bhaira remvura Post navigation